Isicelo -Shanghai Huitian izinto ezintsha Co., Ltd.
Umbane okhokelwayo NO.1 isabelo sentengiso
Ukusebenza nabo bonke abathengi abaphezulu abali-10
Kukho ama-31% esabelo sentengiso kwimveliso yeLed yeemveliso zaseHuiti. Sibonelela ngokubhaka, ukubopha, ukuhambisa ubushushu njlnjl. Isisombululo sokuncamathela kuthotho lwebhetri, umbane kunye nescreen.
Uthengisa isabelo semveliso ye-photovoltaic ngowokuqala emhlabeni
Zontathu iimodyuli ze-photovoltaic, kukho enye esebenzisa iimveliso zeHuiti
U-Huiten ngumsunguli wokuqala wase-China ozimeleyo.
Ukusuka kwi-silica gel ukuya kwipleyiti yangasemva, ukusuka kwipleyiti yangasemva ukuya kwifilimu ye-fluorine, ukusuka kwizixhobo ezingundoqo zokwenza izinto ngokudibeneyo, i-huiten ifezekise ngokupheleleyo uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso kunye nemveliso, kwaye namhlanje iye yaba yinkokeli yehlabathi kwizinto zokupakisha ze-photovoltaic.
NO.1 Isabelo sentengiso seshishini lezithuthi zorhwebo
Kukho ama-37% esabelo sentengiso kushishino lwezithuthi zorhwebo kwiimveliso zaseHuiti. Sele sisebenzisana neJINLONG, YUTONG, JINLV, ZHONGTONG, HAIGE, FUTIAN, njl njl. I-Huitian ibonelela ngesithuthi esithengisayo sonke isisombululo esincamathelayo ukusuka ekutywinweni ukuya kwi-bonding.
Umgangatho ophezulu ufumana ukuthembela kwabathengi kwihlabathi liphela
Inqanaba le-1 lebhulorho yolwandle enqumlayo
HK- Macau - Zhuhai inqumle ulwandle ibhulorho
Umenzi wezixhobo zonxibelelwano ezi-1
Isiphelo esiphakamileyo somenzi wefowuni o-NO.1
Isixhobo sokugqibela sokuhlawula ngokukhawuleza ukukhawuleza isisombululo sokubambelela.
Umvelisi wezixhobo zikaloliwe ze-NO.1 zehlabathi
I-Huitian yayinexesha elide lesivumelwano sobambiswano lobambiswano kwisantya sokugcina inqwelo yokuhamba kunye nomgaqo kaloliwe njlnjl.
Inombolo No.1 yehlabathi yezithuthi ezenza imveliso
Umenzi wombane ongu-1 wehlabathi
I-Huitian sele inembali yeminyaka eli-15 kushishino lokuncamathelisa ngombane, ifumene i-SGS, ul njl njl izatifikethi zamanye amazwe. Ixhaswe ngumgangatho ophezulu kunye nobuchwephesha, ubuchwephesha besicelo esisebenzayo nesithembekileyo, safumana bonke abathengi bethembekile.
Imveliso yemodyuli yeNombolo 1 yePV
UJinko ngoyena mthengisi mkhulu wemodyuli ye-PV ene-14% yesabelo sentengiso sehlabathi kunye nomthamo we-11.5 GW ngo-2018.